China's App Store Inodarika App Store yeJapan | IPhone nhau
China's App Store inodarika yeJapan mune mari
Chitoro cheApple chave chimwe chekambani sosi huru yemari kubva payakatangwa, pamwe nekutengeswa kwemidziyo. Kubva kuuya kwaApple kuChina, zvishoma nezvishoma nyika ino yanga ichiwana mukurumbira mumaakaunzi ekambani egore, asi kwete chete maererano nekutengesa michina, kwayakabatsira zvakanyanya, asi iri kubatsirawo mukutengesa kwemaapplication. Zvinoenderana neazvino App Annie chirevo, chakaburitswa naAppleInsider, musika weAsia waona kukura kunoshamisa mugore rimwe chete.
Kubva kukota yekutanga ya2015 kusvika kune yekutanga quarter ya2016, China yakawedzera ne2.2 huwandu hwemari yeApple ndichingotaura nezve musika wekushandisa, uye huwandu hwacho hunenge huri kuramba huchikwira, saka zvingangoita kuti munguva pfupi, inogona kudarika kana kuenzana nhanho yeUnited States, iri pamusoro pechikamu ichi. Parizvino, China yakatotora Japan, iyo kwemakore akati wandei yaive pachinzvimbo chechipiri, kuseri kweUnited States, nyika yagara iri pamusoro peiyo App Store chinzvimbo.
Chikamu chekukura, kuwedzera kune yakawanda nhamba yezvigadzirwa zvinotengeswa nekambani iri munyika, imhaka yekutengwa kwe-mu-app, ayo ave mafomu anonyanya kufarirwa munyika, kudzinga iyo yekutenga-ne-yekushandisa modhi yeiyo yemahara mafomu, chimwe chinhu icho vashandisi vazhinji vasingangowana chinosetsa, asi icho ichokwadi, nekuti vashanduri vari kutora iyi nzira nyowani yekuita bhizinesi, vachisiya parutivi pfungwa dzavanogona kunge vaine vashoma nezvazvo.
Kana China yeApp Store mari inowedzera ichikura, Zvinotarisirwa kwazvo kuti kusvika gore ra2017 China ichave iri nyika inogadzira mari zhinji mumusika wekushandisa. Izvo zvinofanirwa kutariswa kuti muUnited States, mari kubva muchirevo ichi yakawedzerawo, asi kukura kweChina kwave kunoshamisa, sezvatinoona mumufananidzo unotungamira chinyorwa ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » China's App Store inodarika yeJapan mune mari
Hupenyu hwe iPhone ndeye makore matatu maererano neApple
Maitiro ekudzora kushambadzira yekutevera pane yako iPhone uye iPad